Oh Oh, Kalifoorniya Ma Noqon Karto Xashiishad Sharci Xagaaga • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Sharci dejinta & Sharci dejinta Oh, oh, Kaliforniya ma lahaan karto sharciga xashiishka xagaaga
Oh, oh, Kaliforniya ma lahaan karto sharciga xashiishka xagaaga
albaabka daroogada February 26 2019
maqaal by daroogada February 26 2019
Bixinta xashiishka sharciyeysan ee Kalifoorniya wuxuu ballan qaadayaa inuu qalalo illaa gu'ga haddii aan si dhakhso leh loo marin sharci ahaan.
Talaadadii, Febraayo 19, Senate Bill oo 67 ah oo la daabacay si loo ilaaliyo beeraha cannabis ee furan iyagoo sugaya liisanka joogtada ah.
Kumanaan beeraley ayaa hadda ka shaqeeya oggolaansho ku-meelgaar ah Waaxda Cuntada iyo Beeraha ee California (CDFA). Xayeysiisyada ku meel gaarka ah ee 6.924 waxay ka dhaqso badan yihiin CDFA oo bixisa liisanka sanadlaha ah ee joogtada ah. Liisanka ku-meel-gaarka ah looma dheeraan karo haddii aan sharciga la bedelin.
Waxaa laga joogaa 834 maalmood tan iyo markii codbixiyeyaasha California ay ansixiyeen sharciyeynta xashiishadda bishii Nofeembar 2016. Ilaa hadda, CDFA waxay soo saartay kaliya sagaal ruqsadood oo sanadle ah oo loogu talagalay beeraha xashiishadda. 39 kale oo ruqsad sanadle ah ayaa sugaya bixinta khidmadaha ugu badan $ 44.000 ruqsad kasta.
Khabiirka warshadaha iyo qareenka cannabis Cumar Figueroa ayaa sheegay in aan lahayn liisanka beeraha ee sharci la'aanta aysan jirin wax sharci ah. Dhanka kale, suuqyada sharci darada ah ee gobolka ayaa sii wadi doona.
"Haddii Kalifoorniya ay ka maqnaato xashiishad sharciyeysan, macaamiisha waxay u jeesan doonaan suuqa aan sharciyeysnayn, taas oo xitaa ka dhigaysa mid aad ugu sii adkaanaysa shirkadaha yar ee xashiishadda shatiga ah ee hadhay ay nolol ku helaan," ayay tidhi Figueroa.
Lauren Mendelsohn, oo ah shaqaale ka tirsan shirkadaha sharciga ee Figueroa ayaa tidhi: “Warshadaha xashiishadda sharci ee ugu weyn adduunka ayaa qarka u saaran inay burburaan.
Qoraaga Senate Bill 67 waa Senator Mike McGuire, oo matala beeraha cannabis ee woqooyiga San Francisco.
Waa maxay sababta loo baahan yahay hagis?
Dabcan, kama yarayn xashiishka (iibka aan shatiga lahayn) California. Waa nidaamka xashiishka sharciga ah ee qallajin kara.
Sharci dejinta 64 ee Kaalifoorniya waxay amreysaa rukhsadda dowladda ee dhammaan silsiladda ganacsiga xashiishadda. Laakiin cajaladda casaanka ah ee xafiisku waxay aad ugu ballaadhnayd ruqsad siinta beeraha. Ganacsiyadu waxay u baahan yihiin oggolaansho ka timaada magaalada iyo degmada, oo ay weheliyaan saxiixyo ka socda Waaxda Kalluunka iyo Duurjoogta iyo Guddiga Xakamaynta Kheyraadka Biyaha ee Gobolka California. Codsiga sanadlaha ah ee rukhsadda beeraha ayaa ka kooban 44 bog oo dib u eegista dalabku waxay qaadan kartaa in ka badan afar bilood.
Sababta ugu weyn ee liisanka beeraha ayaa dib loo dhigay qiimeynta deegaanka, ayuu yiri agaasimaha CDFA Richard Parrott on 29 January. Tusaale ahaan, cannabis waa nooca kaliya ee dalagga kaas oo ku xiran sharciga dawlad-goboleedka adag ee adag, Sharciga Tayada Xayawaanka ee California (CEQA).
Senet-ka Bill 67 wuxuu siiyaa saraakiisha dowlada waqti dheeri ah si ay isugu dayaan inay shirkado badan uga gudbaan qiimeynta CEQA si ay u gaaraan shatiga “hordhaca ah” ama “sanadlaha” ah.
Akhri qodobada oo dhan Leafly (EN, isha)
(sawir: Adeegyada Ecowaste)
cannabissharci ahaansharci-dejintaMaraykankayaraanta caanaha
Aurora Sky waxay soo saartaa nus milyan oo kiiloogaraam ah oo ka sameysan 2020
Ku daawee ADHD cannabis
Golaha Wasiirrada: Ma jiro ballaarinta tijaabinta weedhaha
Qufulku wuxuu sababaa kororka isticmaalka xashiishadda iyo ...